Hatchback "Opel Astra Umndeni" kuyinto isizukulwane sesithathu imodeli Opel Astra H, ukukhiqizwa olwaqala ngo-2004. Imoto wathola eziningi ukubonakala "nolaka" of engavamile design labaqaphi elingemuva. Interior Amathrendi zihlukaniswa esezingeni materials futhi design stylish kakhulu. Ukukhiqizwa lokhu model manje uhumushiwe hhayi eJalimane, futhi "Opel" emagatsheni yenkampani, enye yazo ifektri Russian "Autotor" elise Kaliningrad.
"Opel Astra Umkhaya" (hatchback): amanani kanye nemishini
imodeli yakamuva isizukulwane itholakala amazinga amathathu ngombala - Jabulela, Essentia ne-Cosmo. Ukuguqulwa Jabulela ahlinzekwa injini ngokugcwele - amabili 1.6 litre 115-amahhashi motor, enye yazo ifakwe 5-ngesivinini PCR, kanti eyesibili - 5-speed automatic transmission kanye lokubolekwa ezimbili 1.8-litre 140-eqinile 4-speed automatic futhi inhlukano 5-ngesivinini. Izindleko yalezi onobuhle zokhahlamba kusuka izinkulungwane 637. Ukuze 708 thous. Ruble. Ukuguqulwa Essentia wathola eyodwa kuphela injini inketho - a 1.6 litre (115 hp) iyunithi nge manual 5-ngesivinini. Intengo yale uba ngaphakathi 604 THS. Ruble. Njengoba for ukukha Cosmo, yona ifakwe zonke izinhlobonhlobo izinjini ngaphandle 1.6 litre (115 hp) nge-5 speed automatic. Izindleko imoto kule ukucushwa kuhluka ayizinkulungwane 668. Kuya 738 thous. Ruble.
Hatchback "Opel Astra Umndeni": imoto umndeni ejwayelekile
Igama «umndeni» (umndeni) e isihloko salesi imodeli uvele hhayi ithuba: njengoba imoto uyaqaphela wazikhandla ngokugcwele wonke umndeni. Hatchback "Opel Astra Umndeni" kuyinto stylish, okulula isebenze futhi multi-functional ngendlu ezinhlanu imoto, okuyinto ijabulela sisikhulu phakathi abashayeli Russian. Ngaphandle umshini kukhona charm ethile, isitayela lihle futhi isikhulumi ekhangayo. Esikhathini iso abambe umugqa ngomusa ehlukanisa hood ngesigamu. Ngaphambili ingxenye yomzimba nayo ehlotshiswe eziyinkimbinkimbi ikhanda yokukhanya, trapezoid Izinsimbi futhi ohlangothini emoyeni isibalo nge edidiyele ukuvikelwa anti-ukushaqeka.
Salon: ubuhle nenduduzo
Ingaphakathi "Opel Astra hatchback Umkhaya" (esesithombeni kwesokudla) ukuwugcina ngokuphelele, okuyinto design zangaphandle: emaphakathi console Abaklami futhi ahlotshiswa onqenqemeni uhlukanisa futhi wamemezela ubuso lateral. Eliphezulu izinto futhi kuphela enze kube nokwenzeka ukuba ujabulele ngisho nomncane imininingwane ingaphakathi. Control okhiye zihlukile indawo ergonomic enikeza lula futhi kalula ukuphathwa kwazo zonke izinhlangano. Hatchback "Opel Astra Umndeni" wathola uhla eligcwele izici ukuqinisekisa ukuthi okusezingeni eliphezulu induduzo umshayeli nabagibeli. Imoto, isibonelo, a-line ezintathu ifakwe isibonisi multifunction, air conditioning, isimo sezulu, kanye eliphezulu audio umdlali isikhulumi. Ukuze abashayeli abakhetha induduzo premium, kunezinhlobo ezahlukene ukumisa izimoto eziningi izinketho ezengeziwe, kuhlanganise evuthayo phambi izihlalo, ukulawula yomsindo amasondo ayo, ne-trip computer, izibani inkungu nokunye.
Abagulayo 'indlovukazi' nensimu, kungani amahlamvu ayehla kusukela rose?
Kangakanani nesimungumungwane ezinganeni
Akwaziwa actress Argentina Sesiliya Rot. Biography kanye Filmography